Ndị ọzọ karịa Safaris anụ ọhịa, ọ bụ njem nlegharị anya golf ugbu a na East Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ndị ọzọ karịa Safaris anụ ọhịa, ọ bụ njem nlegharị anya golf ugbu a na East Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Egwuregwu • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Dọkịnta Numbaro na Maazị Najib Balala na njem nlegharị anya Golf nke East Africa
Ọbụghị naanị safaris anụ ọhịa na East Africa, ugbu a njem nlegharị anya egwuregwu na -abịa ịkwalite njem ntụrụndụ na mpaghara iji dọta ndị njem egwuregwu iji gbasaa ngwugwu njem ha site na anụ ọhịa gaa egwuregwu n'èzí ogige ntụrụndụ.
Emebela njem nlegharị anya Golf dị ka ihe omume egwuregwu njem mpaghara iji dọta ndị njem ezumike ntụrụndụ na-amasị egwuregwu.
Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania na odeakwụkwọ njem nlegharị anya nke Kenya zukọrọ n'obodo Arusha nke na -eme njem nlegharị anya na Tanzania ka ha wee malite mmalite njem nlegharị anya Golf na East Africa.
A ga -ahazi ngwugwu pụrụ iche maka njem nlegharị anya egwuregwu ka ọ dabara na ndị gọlfụ mba ụwa na -eleta Tanzania.
Tanzania na Kenya, ebe abụọ na-eduga njem nlegharị anya na East Africa, ka malitere njem nlegharị anya Golf dị ka mmemme egwuregwu mpaghara nke a ga-adọta ụdị ndị njem ezumike ntụrụndụ dabere na mpaghara East African Community (EAC) na akụkụ ụwa. .
Ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya sitere na mba abụọ ahụ ekwenyela iwebata wee kwalite njem nlegharị anya Golf n'etiti steeti abụọ a, na -achọ ịdọta ndị njem egwuregwu iji nọrọ ụbọchị ha na mpaghara.
Njem Nleta Golf ga -adọtakwa ndị gọlfụ klaasị ụwa ka ha gaa na mpaghara wee nọrọ ụbọchị ha na -egwu egwu na ogige golf pụrụ iche na Northern Tanzania na Kenya.
Najib Balala na -agba bọọlụ
Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, na odeakwụkwọ njem nlegharị anya Kenya, Maazị Najib Balala, zutere n'obodo Arusha nke na -eme njem nlegharị anya na Northern Tanzania iji malite mmalite nke njem nlegharị anya Golf na East Africa.
Ugbu a, Njem Nleta Golf ga -abụ ihe nlegharị anya ọzọ ma ọ bụ ngwaahịa ndị njem nlegharị anya iji dọta ndị ọbịa mpaghara na mba ofesi, ndị ga -ejikọkwa njem nleta ha site na safari anụ ọhịa na ezumike osimiri gaa tee golf.
A ga -ahazi ngwugwu pụrụ iche maka njem nlegharị anya egwuregwu ka ọ dabara na ndị gọlfụ mba ụwa na -eleta Tanzania. Onye isi oche nke Tanzania Golf Union (TGU), Chris Martin, nwere ntụkwasị obi wee kwuo na Tanzania kwesịrị iguzobe klọb golf iji dọta ndị egwuregwu mba ụwa na ndị njem.
Ihe dị ka ndị egwuregwu bọọlụ golf 140 sitere na mba 13 gụnyere United States, Australia, Canada, Belgium, Netherlands, England, China, Kenya, India, Zimbabwe, South Africa, Uganda, na ndị ọbịa Tanzania kwụsịrị na mmemme “Kili Golf” mbụ.
Njem nlegharị anya egwuregwu abughi akụkụ nke mkpọsa njem na Tanzania, na mwepụta nke Golf Tourism ga -adọta mmefu ego ebe ndị njem ga -agbakwụnyekwu oge ịnọ na Tanzania iji nwee mmasị na tee golf.
Golf bụ otu egwuregwu na -adọta ọtụtụ ndị njem nlegharị anya ma na -ewepụta ihe karịrị ijeri $ 20 kwa afọ na ọkwa ụwa.
Ọ bụ site na nke a ka Tanzania kpebiri ịmalite ịzụ ahịa ndị njem site na asọmpi golf.
Obodo Arusha bụ mmalite maka ndị njem nlegharị anya na ogige Safari nke Tarangire, Ọdọ Manyara, Ngorongoro na Serengeti.
Ebumnuche ịre mpaghara mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka ka ọ bụrụ otu njem nlegharị anya, ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na ndị ọrụ nhazi mpaghara sitere na ndị otu 6 niile ekwenyela ịtọlite ​​EAC Regional Tourism Expo (EARTE) kwa afọ na ebumnuche ịkwalite ọhụhụ mpaghara na azụmaahịa. ya dị ka otu ebe ndị njem na -eme njem.
Steeti ọwụwa anyanwụ Afrịka ga -eme nnukwu ihe ngosi njem nlegharị anya na ngwụcha izu a na -abịa na Arusha, obodo safari na Northern Tanzania. Ọ bụ ihe ngosi izizi na njem nlegharị anya ga -eme na East Africa.
Ihe ngosi ahụ adọtala ndị sonyere na mba ndị otu Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, na South Sudan ka ha gosi ebe nlegharị anya ha n'okpuru nchekasị njikọta mpaghara na njem nlegharị anya.
Tanzania na Kenya akwadola mmegharị efu maka njem mpaghara na mba ụwa mgbe ndị isi ala sitere na steeti abụọ gbara agbata obi kwenyere ịkwalite njem mpaghara na mmegharị ndị mmadụ.
Ọgbakọ East Africa na -eguzo ugbu a dị ka ezigbo ihe atụ nke mmepe njem nlegharị anya mpaghara n'okpuru otu ikpo okwu nke Kọmitii Njem Nleta Africa na -akwado maka mmepe n'ofe kọntinent ahụ.